File to PDF Converter (Ai, PSD, EPS, PNG, BMP, Etc) | Net Guide
Home Infotainment Apps File to PDF Converter (Ai, PSD, EPS, PNG, BMP, Etc)
File to PDF Converter ဟာ Adobe Illustrator (Ai) ?Adobe Photoshop(PSD) extension နဲ့ Adobe Encapsulated Postscript(EPS) တို့လို extension တှနေဲ့ PNG , JPEG/JPG , BMP နဲ့ Camera raw file format (nef, nrw, dng, srf) တှကေို PDF format အဖွဈ ပွောငျးပေးနိုငျတဲ့ file converter app တဈခုဖွဈ ပါတယျ။ Format ပွောငျးခငျြတဲ့ file ကို ဘယျ server ပျေါကိုမှ upload လုပျနစေရာမလိုဘဲ ပွောငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ application က support ပေးထားတဲ့ file format အမြားစုကို convert လုပျနိုငျဖို့အတှကျ အငျတာနကျဖှငျ့စရာလညျး မလိုအပျပါဘူး။ Adobe Illustrator(Ai) , Adobe Photoshop(PSD) extension , Adobe Encapsulated Postscript (EPS) , PNG , JPEG/JPG , BMP နဲ့ Camera raw file format (Sony, Nikon, Samsung, Kodak, Canon, Etc) စတဲ့ file extension တှကေို ရှေးပေးလိုကျတာနဲ့ သငျရှေး ပေးထားတဲ့ extension နဲ့ကိုကျညီမှုရှိတဲ့ သငျ့ဖုနျးထဲက file အားလုံးကို ဒီ app က list လုပျကာ ဖျောပွပေး မှာဖွဈပါတယျ။ အသုံးပွုသူအနနေဲ့ အဲဒီ list ထဲကနမှေ မိမိ format ပွောငျးခငျြတဲ့ file ပျေါမှာ tap လုပျပွီး တော့ လိုခငျြတဲ့ PDF format သို့ အလှယျတကူပွောငျးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ app ကိုအသုံးပွုဖို့အတှကျ Android 5.0နဲ့အထကျ လိုအပျပါတယျ။
File to PDF Converter ဟာ Adobe Illustrator (Ai) ?Adobe Photoshop(PSD) extension နဲ့ Adobe Encapsulated Postscript(EPS) တို့လို extension တွေနဲ့ PNG , JPEG/JPG , BMP နဲ့ Camera raw file format (nef, nrw, dng, srf) တွေကို PDF format အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ file converter app တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ Format ပြောင်းချင်တဲ့ file ကို ဘယ် server ပေါ်ကိုမှ upload လုပ်နေစရာမလိုဘဲ ပြောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ application က support ပေးထားတဲ့ file format အများစုကို convert လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အင်တာနက်ဖွင့်စရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ Adobe Illustrator(Ai) , Adobe Photoshop(PSD) extension , Adobe Encapsulated Postscript (EPS) , PNG , JPEG/JPG , BMP နဲ့ Camera raw file format (Sony, Nikon, Samsung, Kodak, Canon, Etc) စတဲ့ file extension တွေကို ရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ သင်ရွေး ပေးထားတဲ့ extension နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ သင့်ဖုန်းထဲက file အားလုံးကို ဒီ app က list လုပ်ကာ ဖော်ပြပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ အဲဒီ list ထဲကနေမှ မိမိ format ပြောင်းချင်တဲ့ file ပေါ်မှာ tap လုပ်ပြီး တော့ လိုချင်တဲ့ PDF format သို့ အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Android 5.0နဲ့အထက် လိုအပ်ပါတယ်။
Previous articleတရုတျမှာ ယခုလ ၈ ရကျနရေ့ောငျးခလြာမယျ့ Galaxy Fold